मलेसियामा नेपाली सुरक्षागार्डलाई निर्घा’त कु’ट्ने नेपाली नै ! – iNews16
१८ साउन, काठमाण्डौ । मलेसियामा नेपाली कामदार माथि कुटकु’टगर्ने ब्यक्ति नेपालीनै भएको फेला परेको छ । मलेसियास्थित नेपाली दूताबासका अनुसार नेपाली सुरक्षागार्डमाथि कम्पनीका नेपाली सुपरभाईजलेनै नि’र्घात रुपमा कु’टपिट गरेका हुन् ।पी’डित नेपाली श्रमिक अहिले मलेसियास्थित नेपाली दूताबासमा आश्रय लिईरहेको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले बताए ।
कु’टाई खाने नेपाली श्रमिकका दाईले नेपाल बाट दूताबास लाई सम्पर्क गरेका थिए । राजदूत पाण्डेले भने,“हामी श्रमिक भएको स्थानमा गएर पी’डितलाई दूताबासमा ल्याएका छौ । सुरक्षाका लागि उनलाई दूताबासमा नै राखिएको छ ।” राजदूत पाण्डेका अनुसार पी’डक नेपाली श्रमिक गै’रकानुनी रुपमा मलेसियामा बस्दै आएका छन् । उनले पहिलो कम्पनी छोडी अहिलेको कम्पनीमा कामगर्न थालेको दूताबासले जनाएको छ । त्यस्तै दूताबासले पी’डक श्रमिकलाई पनि सम्पर्क गरिसकेको छ ।
Previous उप’स’चिव स’ञ्जेललाई कु’ट’पि’ट ग’री अ’भ ‘द्र व्य’व हार गर्ने कर्मचारीहरूलाई मु’द्दा !
Next १५ वर्षीय नि’ष्ठुरी आमाले जिउदै बच्च माटोमा गा’डि दिएपछि…